မာရှယ်ကျွန်းစုများ၊ ပစိဖိတ်ဒေသသို့ ဦး တည်ရာ ခရီးသွားသတင်း
မာရှယ်ကျွန်းစုများ၊ ပစိဖိတ်ဒေသရှိ ဦး တည်ရာ
Mariela Carril | | ကျွန်းများ, ခရီးသွား
ငါသိပ်မဖတ်တတ်ဘူး မာရှယ်ကျွန်းစု ဒုတိယကမ္ဘာစစ်၊ ပစိဖိတ်သမုဒ္ဒရာ၊ အမေရိကန်နှင့်ကာရစ်ဘီယံရှုခင်းများကိုသတိရလာသည်။ ဟုတ်လား? ကောင်းပြီ၊ ဟုတ်ကဲ့၊ ဒီဒေသနှင့်သက်ဆိုင်သည့်ဤကျွန်းများနှင့်သက်ဆိုင်သည် Micronesia.
ယနေ့မာရှယ်ကျွန်းစုများမှာ သမ္မတနိုင်ငံ ဒါပေမဲ့သူတို့ရဲ့သမိုင်းတစ်လျှောက်မှာမတူညီတဲ့နိုင်ငံတွေရဲ့လွှမ်းမိုးမှုအောက်ရောက်ခဲ့တယ်။ သငျသညျဓာတ်ပုံ၌ကျွန်းများကဲ့သို့ကျွန်းများကိုကြိုက်လျှင်သင်အချို့ခုန်ချင်တယ် အများဆုံးထူးခြားဆန်းပြား ဦး တည်ရာ သို့မဟုတ်အနည်းငယ်သာလူသိများသည်၊ ယနေ့ကျွန်ုပ်သည်ဤရှာဖွေတွေ့ရှိမှုခရီးကိုကျွန်ုပ်အားအဆိုပြုထားသည်။
ဒါဟာဖြစ်ပါသည် ကျွန်းနိုင်ငံ သောကွောငျ့ဖွစျသညျ အီကွေတာလိုင်းအနီး, ရေပေါ်မှာ ပစိဖိတ်သမုဒ္ဒရာ။ အထက်တွင်ပြောခဲ့သည့်အတိုင်း၎င်းသည်မိုက်ကရိုနီးရှား၏အစိတ်အပိုင်းဖြစ်ပြီးနောက်ဆုံးသန်းခေါင်စာရင်းတွင်အချက်အလက်များကပြသည် လူ ဦး ရေ ၆၀,၀၀၀ နီးပါးရှိသည်။
တိုင်းပြည်ဟာအုပ်စုတစုနဲ့ဖွဲ့စည်းထားတယ် သန္တာ atolls နှင့်မြို့တော်၌တည်ရှိ၏ Majuro ။ ဘီစီအီးဒုတိယထောင်စုနှစ်အတွင်းပထမဆုံးအခြေချနေထိုင်သူများသည်ကနူးလှေများရောက်ရှိခဲ့ပြီး ၁၆ ရာစုတွင်ဥရောပသားများရောက်ရှိခဲ့ကြောင်းသမိုင်းကဖော်ပြသည်။ စပိန်နှင့်ပေါ်တူဂီ။ သို့သော်မာရှယ်အမည်ကိုဂျွန်မာရှယ်မှခေါ်ယူခဲ့ပြီး ၁၈၀၀ ပြည့်လွန်နှစ်များနှောင်းပိုင်းတွင်သူတို့ကိုလည်ပတ်ခဲ့သည်။
စပိန်တို့သည်ကျွန်းများနှင့်အတူကြာမြင့်စွာနေခဲ့သော်လည်းနောက်ပိုင်း ၁၉ ရာစုနှောင်းပိုင်းတွင်ဂျာမန်အင်ပါယာသို့ရောင်းချခဲ့သည်။ ပထမကမ္ဘာစစ်တွင်ဂျပန်တို့ကသူတို့ကိုကျူးကျော်ခဲ့သည် နှင့်ဒုတိယကမ္ဘာစစ်အတွင်းတွင် '44 ၏မဲဆွယ်စည်းရုံးရေးနှင့်အတူအမေရိကန်များကနေရာရွှေ့ပြောင်းခံခဲ့ရသည်။ အနုမြူဗုံးစမ်းသပ်မှုများသည်ပtheိပက္ခဖြစ်ပြီးနောက်အဝေးကြီး၌ပင်ဖြစ်ပွားခဲ့သည်။ ဒါဆိုအချိန်ကုန်သွားတယ်။ ကျွန်းများသည်ပစိဖိတ်ဒေသရှိနိုင်ငံခြားသားများကဲ့သို့လက်တလောတွင်လွတ်လပ်ရေးရရှိခဲ့သည်။
ဒီနေ့မာရှယ်ကျွန်းစုတွေဟာက သမ္မတနှင့်အတူပါလီမန်သမ္မတနိုင်ငံနှင့်အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုနှင့်ဆက်စပ်နေသည်။ ဥပမာဒီတိုင်းပြည်ကစာတိုက် ၀ န်ဆောင်မှုကိုကာကွယ်ခြင်း၊ ဒီတော့ရှိတယ် တရားဝင်ဘာသာစကားနှစ်မျိုး မာရှယ်လစ်လူမျိုးနှင့်အင်္ဂလိပ်လူမျိုး၊ အမေရိကန်လူမျိုးများ၊ တရုတ်လူမျိုးများ၊ ဖိလစ်ပိုင်လူမျိုးများစသည်တို့ဖြစ်သည်။
ကျွန်းများ၏မူလအစမှာမီးတောင်ဖြစ်သည်။ ၎င်းတို့ကို Semi- နစ်မြုပ်နေသောမီးတောင်များပေါ်တွင်တွေ့ရသည် ဟာဝိုင်ယီနှင့်သြစတြေးလျအကြားတစ်ဝက်ဖြစ်သည်။ Atolls များသည်အုပ်စုနှစ်ခုဖြစ်သော Ratak နှင့် Ralik (နေထွက်မှုနှင့်နေဝင်ချိန်အသီးသီး) ဖြစ်သည်။ ကျွန်းများ၏ကွင်းဆက် ၂ ခုသည်စတုရန်းကီလိုမီတာ ၂ သန်းနီးပါးနှင့်တစ်ပြိုင်နက်တည်းစီးဆင်းနေပြီး၎င်းတို့အနက် ၁၈၀ သာမြေနေရာဖြစ်သည်။ အုပ်စုတစ်ခုစီတွင်ကျွန်း ၁၅ ခုမှ ၁၈ ခုကြားရှိရာနိုင်ငံတွင်စုစုပေါင်း ၂၉ ခုနှင့်ကျွန်း ၅ ကျွန်းရှိသည်။
၎င်းတို့အနက် ၂၄ ယောက်မှာလူနေထိုင်ပြီးအချို့မှာကျွန်းများလည်းရှိသည်။ Bikini Atoll ကဲ့သို့ပင်အနည်းငယ်သာရွာသွန်းသောကြောင့်သို့မဟုတ်နျူကလီးယားညစ်ညမ်းမှုရှိသောကြောင့်ကျန်တဲ့အရာတွေကတော့အချည်းနှီးပါပဲ။ ရာသီဥတုဘယ်လိုလဲ တစ်ဦးလည်းမရှိ ခြောက်သွေ့ရာသီ ကြောင်းဒီဇင်ဘာလကနေAprilပြီလနှင့်တ ဦး တည်းတတ်၏ မိုး မေလနှင့်နိုဝင်ဘာလအကြား။ တိုင်ဖွန်းမုန်တိုင်းများရှိပြီးပင်လယ်ရေမျက်နှာပြင်မြင့်တက်လာပါကကျွန်းများသည်အန္တရာယ်ရှိသည်။
မာရှယ်ကျွန်း၏မြို့တော်မှာ Majuro Atoll ဖြစ်သည်မျက်နှာပြင် ၁၀ စတုရန်းကီလိုမီတာနီးပါးရှိပြီးလှပသောဂွိုင်ကြီးတစ်ခုလုံးရှိသည်။ ၎င်းတွင်ဆိပ်ကမ်း၊ အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာလေဆိပ်၊ ဟိုတယ်များနှင့်စီးပွားဖြစ်ခရိုင်ရှိသည်။ မြို့တော်မှာ Delap-Uliga-Djarrit ဖြစ်သည် ၎င်းသည်လူ ၂၀၀၀၀ ခန့်နေထိုင်ကြသည်။ ၎င်းသည်တံခါးပေါက်ဖြစ်သော်လည်းမာရှယ်ကျွန်းများ၏စစ်မှန်သောအလှအပများသည်ပြင်ပကျွန်းများပေါ်တွင်ရှိသည်။
ခရီးသွား do ည့်သည်ဘာလုပ်ဖို့လာသလဲ။ ကောင်းပြီ, ကမ္ဘာလှည့်ခရီးသွားတို့၏ရှင်ဘုရင်တို့သည်ဖြစ်ကြသည် ရေငုပ်ခြင်းနှင့်ရေကူးခြင်း။ ကျွန်းများသည်အလွန်ကောင်းမွန်သောရေငုပ်နေရာတစ်ခုဖြစ်ပြီးအကောင်းဆုံးဖြစ်သည် Rongelap။ သင်ဤအကြားငုပ်နိုင်နေရာအရပ်ဖြစ်၏ ဒုတိယကမ္ဘာစစ်ရေယာဉ်များနှင့်လေယာဉ်များ၏ရေအောက်များ။ နောက်ထပ်ရေပန်းစားသော ဦး တည်ရာသည် Bikini ကျွန်း လေနှင့်ရေအောက်တွင်နျူကလီးယားပစ္စည်းအများအပြားပေါက်ကွဲခဲ့သည့်နေရာ။ ဒီနေ့နျူကလီးယားစမ်းသပ်မှုအတိအကျကိုစူးစမ်းသောလမ်းညွှန်ခရီးစဉ်များရှိသည်။ တကယ်တော့, ယူနက်စကိုသည် Bikini ကိုကမ္ဘာ့အမွေအနှစ်နေရာအဖြစ်ကြေငြာခဲ့သည်။
နေရာထိုင်ခင်းအရဆိုလျှင်ကျွန်းများမှကမ်းလှမ်းသည် စျေးပေါတဲ့နေရာထိုင်ခင်း ထ အပြည့်အဝအခိုးအငှေ့ညှိရာကိရိယာမှာဟိုတယ်များ y တည်းခိုခန်းများ။ ဘားများနှင့်စားသောက်ဆိုင်များ၊ သင်ကသူတို့ကိုဇိမ်အရှိဆုံးဟိုတယ်များမှာသာတွေ့လိမ့်မည်။ မင်းလည်းလုပ်နိုင်တယ် စခန်းချ Majuro နှင့်အခြားကျွန်းများ၌တည်၏။ မာရှယ်ကျွန်း Vis ည့်သည်များအာဏာပိုင်နှင့်အမြဲဆက်သွယ်ခြင်းသည်အကောင်းဆုံးနေရာကိုရှာဖွေရန်။ မာရှယ်ကျွန်းစုကိုဘယ်လိုဖြတ်သန်းရမလဲ။
လေကြောင်းဖြင့်ကျွန်းများနှင့်ကျွန်းများအကြားအတွင်းပိုင်းလေကြောင်းလိုင်းများရှိပြီးစင်းလုံးငှားများလည်းရှိသည်။ ရှိပါတယ် အဝေးပြေးလမ်းမကြီး, သင်သည်ညာဘက်ကိုမောင်း, သူတို့အတော်များများခင်းကြသည်။ ထို့ကြောင့်သင်လုပ်နိုင်သည် ကားတစ်စီး၊ ဗင်သို့မဟုတ်မီနီဗန်များကိုငှားရမ်းပါ။ ဂျပန်ကားများပင်။ အငှားယာဉ်များသည်အခြားရွေးချယ်စရာတစ်ခုဖြစ်ပြီးစျေးတစ်ခုတည်းနှင့်ထိုင်ခုံလျှင်ပေးချေရသည့်အတွက်ခွဲဝေမှုမှာပုံမှန်ဖြစ်သည်။ အဲဒီမှာလည်းရှိပါတယ် ငှားရမ်းသောလှေ သူတို့ကိုကျွန်းကနေကျွန်းတစ်ကျွန်းကိုခုန်ထွက်ဖို့ဒါမှမဟုတ်လေ့လာရေးခရီးအတွက်သွားငှားကြတယ်။
မာရှယ်ကျွန်းစုရှိအဓိကဆွဲဆောင်မှုများမှာအဘယ်နည်း။ ငါတို့ပြောခဲ့သလိုပဲ bikini atoll ၎င်း၏နျူကလီးယားသမိုင်းနှင့်အတူ Alele ပြတိုက် ဒေသခံသမိုင်းနှင့်တကွ, မြို့တော်ကိုယ်နှိုက်က၎င်း၏ကမ်းခြေများနှင့်စျေးဆိုင်နှင့်နှင့်၏ ဦး တည်ရာ ဒုတိယကမ္ဘာစစ်၏သန္တာနှင့်ကျွံမှုနှင့်ဆက်စပ်သောရေငုပ်ခြင်းနှင့်ရေကူးခြင်း။ အဆိုပါ ငါးဖမ်းလေ့လာရေးခရီး သူတို့ကဒီခရီးစဉ်ကိုကမ်းလှမ်းတဲ့ဟိုတယ်အများစုမှာလည်းလူကြိုက်များကြပြီး Marshall's Billfish Club မှာထပ်ထည့်ကြတယ်။
နောက်ထပ်ရေပန်းစားသော ဦး တည်ရာသည် လော်ရာ, အလွန်စိတ်အေးလက်အေးရပ်ရွာသန္တာကျောက်တန်းများဖြင့်ကာကွယ်ထားသောလှပသောသဲဖြူသဲသောင်ပြင်ရှိသည်။ လည်းဖြစ်ပါတယ် Maloelap နှင့် Mili Atoll, ပုံမှန်လမ်းလျှောက်ခြင်း၊ တစ်နေ့တာခရီးစဉ်နစ်မြုပ်နေသောသင်္ဘောများ၊ သမိုင်းဝင်အဆောက်အအုံများကိုကြည့်ရှုရန်နှင့်ဒေသခံအစားအစာများကိုစားရန်အတွက်သင် snorkel လုပ်သောနေရာဖြစ်သည်။
နောက်ထပ်တစ်ရက်ခရီးကတော့ အင်နီကိုကျွန်း၊ Majuro ကနေမိနစ် ၄၀ လှေစီးပြီး Majuro Laguna နားမှာရှိတယ်။ Eneko သည်သီးသန့်ဖြစ်ပြီးဘန်ဂလိုအသေးစားများရှိသည်။ ကမ်းခြေကအံ့မခန်းပါပဲ။ မာရှယ်ကျွန်းစုများသည်လှပသော်လည်းရိုးရှင်း။ အကန့်အသတ်ရှိသည်။ သင်လည်းနာမည်ပေးရမယ် Jaluitsnorkelling အတွက်အလွန်ကောင်းမွန်သောဝေးလံခေါင်သီသော atoll တစ်ခုဖြစ်သည်။
ညဘဝရှိလား ရေငုပ်ပြီးနေ ၀ င်ပြီးနောက်တွင်ကျွန်ုပ်သည်ရေချိုး။ အရက်သောက်ခြင်းသို့သွားနိုင်ပါသလား။ ဟုတ်တယ်၊ Majuro နှင့် Ebeye ၌တည်၏ နိုက်ကလပ်တွေလည်းရှိတယ်၊ ဒစ္စကိုရှိတဲ့ဟိုတယ်တွေလည်းရှိတယ်။ အများကြီးအများကြီးမဟုတ်ပေမယ့်အလုပ်ဖြစ်တယ်။ ဒီကိုထည့်သွင်းထားပါသည် စားသောက်ဆိုင် တရုတ်၊ ဂျပန်၊ ဗီယက်နမ်၊ ကိုရီးယားနှင့်အနောက်တိုင်းအစားအစာများ။ ဟုတ်ပါတယ်၊ အချို့ကျွန်းများတွင်အရက်သုံးစွဲခြင်းကိုတားမြစ်ထားသည်။ ကောင်းသောအရာကတစ် ဦး အစွန်အဖျားစွန့်ခွာရန်အသုံးပြုသည်မဟုတ်သောကြောင့်ဖြစ်သည်။
ကျွန်ုပ်တို့မြင်တွေ့ရသည့်အတိုင်းကျွန်းများတွင်ခရီးသွား infrastructure ည့်အခြေခံအဆောက်အအုံများကြီးကြီးမားမားမရှိသော်လည်း၎င်းတို့သည်ကျွန်ုပ်ထင်သည်မှာဝေးလံသောနေရာတစ်ခုဖြစ်သည်။ မင်းရဲ
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - ခရီးသွားသတင်း » ခရီးသွား » ကျွန်းများ » မာရှယ်ကျွန်းစုများ၊ ပစိဖိတ်ဒေသရှိ ဦး တည်ရာ
Combarro, Galicia အတွက်ချစ်စရာကောင်းမြို့